Banijya News | राजनीति - Banijya News राजनीति - Banijya News
विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नागेश कोइरालाले जितेको छन् । शनिबार बिहान सम्पन्न मतगणनामा उनी बिजयी भएका हुन् । उनी संयुक्त गठबनधनका तर्फका उम्मेदवार हुन् । उनले करिब ३० हजार माथि मत प्राप्त गर्दै विजयी प्राप्त गरेका हुन् । अन्तिम मत परिणामसम्माम उनले ३० हजार १७० मत ल्याएर महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएको निर्वाचन…
नगर प्रमुखमा पाँच महिला निर्वाचित,गाउँपालिकामा ११
स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिलेसम्मको परिणामअनुसार महिला नगरप्रमुखमा पाँच जना र गाउँपालिका अध्यक्षमा ११ जना निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेसम्म १७८ नगरपालिकामा प्रमुखमा निर्वाचित भएकामा नेपाली कांग्रेसबाट नगरप्रमुखमा दुई जना र नेकपा (एमाले)बाट तीन महिला मात्र नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्। यस्तै ४०७ गाउँपालिकाको अध्यक्षमध्ये कांग्रेसबाट चार, एमालेबाट चार र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट तीन…
स्थानीय तहको ६३८ वटामा मतगणना हुँदा २८३ वटामा काँग्रेस विजयी, अन्यमा को ?
स्थानीय तहमा सम्पन्न निर्वाचनको हालसम्म ६३८ वटामा मतगणना सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा पालिकामा नेपाली कांग्रेसले जित निकालेको छ । त्यसपछि क्रमसः नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपालले बढी पालिकामा जित निकालेका छन् । कांग्रेसले…
स्थापितको क्षेत्रमा काँग्रेसको जित, बालेन पनि परे पछि
नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार केशव स्थापितले मतदान गरेको काठमाडौंको २८ नम्बर वडामा कांग्रेसको प्यानलै विजयी भएको छ । कांग्रेसका वडाध्यक्ष उम्मेदवार भाइराम खड्गी १२८१ मत ल्याएर वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका विपेन्द्र खड्गीले १०७२ मत ल्याए ।...
राष्ट्रियसभा सांसदहरूले आव २०७९/८० को बजेट मुलुक आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा उहाँहरुले मुलुकको कृषि र पर्यटनलागतयका क्षेत्रमा लगानी बढाउने र आत्मनिर्भरतातर्फ केन्द्रित हुने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकपा (एमाले)...
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको आजसम्म ५७० स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज आयोगमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराएका हुन् । पौडेलका अनुसार हालसम्म...
रोल्पाका दसवटै पालिकाको मतगणना सम्पन्न भएको छ । आज सम्पन्न मतगणनाअनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र) सात, नेपाली कांग्रेस दुई र नेकपा एमाले–कांग्रेस गठबन्धन एउटा पालिकामा विजयी भएका छन् । रोल्पा नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट सुरेन्द्र थापा घर्ती प्रमुखमा विजयी भएका छन् ।...
१० पटकसम्म वडाध्यक्ष बनेका व्यञ्जनकारलाई काग्रेसका भतिजले हराए
ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १० मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका नरसिंह व्यञ्जनकार पराजित बनेका छन् । यसअघि १० पटकसम्म वडाध्यक्षमा निर्वाचित बनेका उनी यस पटक भने पराजित बनेका छन् । ११ औं पटक वडाध्यक्ष निर्वाचित हुने उनको योजनालाई काँग्रेसका उम्मेदवारले ब्रेक...
देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे कार्यकालको आज अन्तिम दिन हो । २०७४ मा चार चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरणको वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चयन भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल जेठ ६ गते सुरु भएको...
काठमाडौँ महानगरमा स्थापितको वडामा बालेनको अग्रता
काठमाडौँ महानगरको जारी मतगणनाको परिणामअनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले २० हजार भोट कटाएका छन् । ५४, ६२१ भोट गणना हुँदा बालेनले २१, १११ भोट पाए भने उनको प्रतिस्पर्धी एमालेका मेयर उम्मेदवार केशव स्थापित १०, ९९८ भोट ल्याएका छन् । त्यस्तै...
Page 1 of 2531234Next ›Last »
चार महिनाम एक लाख ३७ हजारभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिए